Wararka Suuqa Maanta Ciyaaraha: Gomez, Coman, Haaland, Martial, Azpilicueta, Marquinhos, Milinkovic-Savic | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta Ciyaaraha: Gomez, Coman, Haaland, Martial, Azpilicueta, Marquinhos, Milinkovic-Savic
Real Madrid ayaa isha ku haysa daafaca dhexe ee Liverpool iyo England Joe Gomez oo 24 jir ah. (Mail).
Manchester United , Barcelona iyo Real Madrid ayaa dhamaantood isha ku haya garabka Bayern Munich iyo France Kingsley Coman, oo 25 jir ah. (Mundo Deportivo).
Liverpool ayaa tartan ugu jirta saxiixa 21 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland. (Sky Germany)
Tababaraha ku meel gaadhka ah ee Manchester United Ralf Rangnick ayaa kala hadlay Haaland aabihiis Alfe-Inge Haaland suurtogalnimada ay kula soo wareegi karaan weeraryahanka sanadka soo socda. (Manchester Evening News)
Weeraryahanka Manchester United iyo France Anthony Martial, oo 26 jir ah, ayaa doonaya inuu amaah ugu biiro Sevilla . (Sky Sports)
Kabtanka Chelsea Cesar Azpilicueta, oo 32 jir ah, ayaa doonaya inuu sii joogo kooxda inkastoo Barcelona ay soo bandhigtay xiisaha ay u qabto daafaca reer Spain marka uu qandaraaskiisu dhaco xagaaga. (The Athletic)
Manchester United ayaa la xiriirtay River Plate heshiis 17 milyan ginni ah si ay ula soo saxiixato 21 jirka reer Argentina Julian Alvarez. (Ole )
Tottenham Hotspur iyo Roma ayaa ku loolamaya saxiixa khadka dhexe ee Hoffenheim iyo xulka qaranka Germany ee Florian Grillitsch oo 26 jir ah (Sky Germany).
Manchester United ayaa xiiseyneysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Lazio iyo Serbia Sergei Milinkovic-Savic, 26. ( Il Messaggero.)
Chelsea ayaa dalab 72 milyan ginni ah ka gudbisay daafaca Paris St-Germain Marquinhos, oo 27 jir ah, xagaagii hore waa laga soo diiday. (L’Equipe)
Daafaca dhexe ee Brazil Marquinhos ayaa heshiis cusub u saxiixi doono kooxda PSG ilaa 2026 ama 2027. (Fabrizio Romano)
Everton ayaa isku dayi doonta markii seddexaad inay lasoo saxiixato daafaca midig ee Scotland Nathan Patterson, 20. (Guardian).
Newcastle United ayaa bartilmaameedsaneysa lix ciyaaryahan oo ay ku jiraan labo amaah, suuqa kala iibsiga ee Janaayo. (90 daqiiqo)
Magpies ayaa ah kuwa safka hore kaga jira kooxaha doonaya inay la soo saxiixdaan daafaca dhexe ee Wales Joe Rodon oo ay amaah kaga soo qaataan Tottenham bisha Janaayo, iyadoo Leeds United iyo Watford ay sidoo kale isha ku hayaan 24 jirkaan. (Telegraph)
Brighton ayaa sidoo kale xiiso u qabta Rodon, kaasoo doonaya inuu boos joogto ah ka helo kooxda. (times)
Brentford, Everton, Newcastle iyo West Ham ayaa dhamaantood isha ku haya 20-jirka khadka dhexe ee kooxda Nottingham Forest Brennan Johnson, kaasoo kooxda Championship ay ku qiimayso 20 milyan ginni. (DAILYMAIL)
Aston Villa ayaa afar dalab ka heshay 25 jirka weerarka uga ciyaara Brazil Wesley, kaasoo amaah kula jooga Club Brugge. (HLN – ee Dutch)
West Ham United iyo Barcelona ayaa hogaaminaya tartanka loogu jiro garabka Real Sociedad ee Belgium Adnan Januzaj, oo 26 jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaaga. (TodoFichajes)
Cabsida ku saabsan xaraashka shidaalka Soomaaliya. Diidmada Puntland iyo shirka ka...
Rooble oo Si dad-ban u dhabar jabinaya Farmaajo, Qoor qoor oo...
Horudhac: Brentford Vs Chelsea ee Koobka EFL Cup, Wararka Labada Koox...